झापा काँग्रेसमा सिटौला–शर्मा समिकरण
झापा काँग्रेसमा सिटौला–शर्मा समिकरण नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन ।
सेतोपत्र डेस्क बुधबार, असोज १३, २०७८
झापा, असोज १३ । आइतबार सकिएको गाउँ र नगरको अधिवेशनसँगै झापामा पक्षधरताको बहस सुरु भएको छ । प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकी र सरिता प्रसाईंको गृहजिल्ला भएका कारण पनि पालिका तहमा छानिएको नेतृत्वलाई लिएर यस्तो बहस सुरु भएको हो । सिटौला नेपाली राजनीतिमा चलाख र मध्यमार्गी नेता मानिन्छन । शर्मा प्रखरवक्ता र कांग्रेसमा सम्भावना बोकेका युवा नेता हुन । जिल्लमा ‘सेतो बाघ’ को उपनामले चिनिने बुढाथोकी कार्यकर्ताका माझ प्रभाव जमाएका नेता मानिन्छन । हक्की स्वभावका बुढाथोकी पार्टी नेतृत्वसँगै पनि खासै झुक्दैनन । उनको आफ्नै प्रभाव र स्वाभाव छ । मन्त्री भइसकेकी प्रसाईं काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन । पार्टी पंक्तिमा प्रभाव राख्ने प्रसाईं युवा महिला नेतृ हुन । प्रष्ट देखिएका यिनै कारणले पालिका तहमा को र कसको निकट व्यक्ति नेतृत्वमा आयो भनेर बहस हुनु स्वभाविक हो ।
संविधानसभाका सदस्य तथा पार्टीको बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सुधीरकुमार शिवाकोटी र पूर्वसांसद तथा अग्रज नेता डिल्लीप्रसाद सिटौलाको प्रभाव पनि झापामा राम्रै छ । नाताले डिल्ली कृष्ण सिटौलाका दाजु भएकाले पनि झापाली राजनीतिमा उनीहरूको बोलवाला चल्छ । यी कारण पनि पालिका तहको नेतृत्वमा निकटताको बहस भित्रीएको हो । अहिले झापामा सुरु भएको बहस सिटौला र शर्माको पोजिसनमा केन्द्रित छ । शर्माले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको र सिटौलाले आफू नेतृत्वको तेस्रो धारलाई निरन्तरता दिने पटकपटक दोर्होयाएकाले पनि अहिलेको बहस सुरु भएको हो । सिटौला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कोइराला परिवारसँग मिल्ने मुडमा छैनन । त्यो उनका लागि गह्रौं हुने निकटवर्तीहरुको बुझाइ छ । आफूहरू हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिटौलालाई स्पेस दिएर राजनीतिमा स्थापित गरेको भनेर कोइराला परिवार उनीसँग बेखुसी छ । जसकाकारण सिटौला कोइराला परिवारसँग सितिमिति मिल्ने अवस्थामा छैनन । सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिल्ने अवस्था आएपनि सिटौला आफ्नो शक्ति संचित गरेरै भित्रने दाउमा छन । जसका लागि जिल्लामा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न सिटौला चाहान्छन ।
आठ नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको झापामा चारवटा पालिकामा सर्वसम्मत सभापति छानिएका छन । जसमा सिटौला, शर्मा र बुढाथोकी निकट एकएक जना छन । झापा गाउँपालिका सभापति सागिरथ गणेश बुढाथोकी निकट मानिन्छन । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका सभापति चक्र शेर्मा प्रवक्ता शर्माका खास मानिस हुन । कचनकवल गाउँपालिकाका सभापति तुलाराम अधिकारी सिटौला निकट मानिन्छन । तर, अधिकारीको जिल्लामा खास प्रभाव छैन । कचनकवलमा कालिन्द्र राजवंशी र भूमी राजवंशी सिटौलाका खास मान्छे हुन । उनीहरूले भनेको व्यक्ति अगाडि सार्दा सर्वसम्मत नहुने भएपछि सिटौलाले अधिकारीलाई अघि सारेर सर्वसम्मत बनाएको नकटवर्तीहरु सुनाउँछन । सिटौला निकट कचनकवलका एक नेताले भने, ‘कालिन्द्र र भूमीको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने देखेरै सिटौलाले तेस्रो मानिस अघि सारेर सर्वसम्मत नेतृत्व आफ्नो पक्षमा राखेका हुन ।’ सिटौलाले कालिन्द्रलाई कचनकवल गाउँपालिकाको अध्यक्ष र भूमीलाई प्रदेश सांसदको उम्मेद्वार बनाइसकेकाले पनि अधिकारी यसपटक रोजाइमा परेको बताइन्छ । सहमतिका लागि अरुले पनि स्वीकार्ने व्यक्ति चाहिने भएकाले सिटौलाको कोटामा अधिकारी सभापति बनाइएका हुन । हल्दिबारी गाउँपालिका सभापति गंगा प्रसाईं मध्यमार्गी मानिन्छन । त्यहाँ सिटौला निकट होम चुडाल सभापतिका दाबेदार थिए । उनलाई अन्य पक्षले सहजै स्वीकार्ने नदेखिएपछि प्रसाईंलाई अघि सारेर सर्वसम्मत सभापति बनाइएको हो । हल्दिबारी–४ का वडाध्यक्ष समेत रहेका चुडाललाई भावी गाविस अध्यक्षका रूपमा अघि सार्ने आश्वासन दिएर मनाइएको कांग्रेसका एक जिल्ला नेताले बताए । झापा गाउँपालिकाका सभापति बुढाथोकी निकट हुन । जिल्ला सभापतिका उम्मेद्वार देउमान थेवेको आग्रह र बुढाथोकीको पहलमा गणेशलाई सर्वसम्मत सभापति बनाइएको हो । झापा क्षेत्र नं. ४ बुढाथोकीको प्रभाव रहेको निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छन । आफू निर्वाचन नलड्ने भएपछि गत संघीय चुनावमा बुढाथोकीले आफ्ना विश्वास पात्र थेवेलाई उम्मेद्वार बनाएर चुनाव लडाएका थिए । तर, थेवेले चुनाव हारेपछि बुढाथोकी आफैँ सो क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने मुडमा रहेको उनी निकट नेताले बताए । यसअघि नै चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका बुढाथोकी पूर्ण स्वस्थ छैनन । जसका कारण राजनीतिमा उनको सक्रियता विगतको तुलनामा कम छ । तथापि, बुढाथोकीले सो क्षेत्रको राजनीतिमा चासो लिएर गणेशलाई झापा गाउँ पालिकाको सभापति बनाएको बुझिएको छ ।
झापाका ११ वटा पालिकामा निर्वाचनबाट नेतृत्व छानिएको छ । जसमध्ये मेचीनगर र शिवसताक्षी नगरपालिकामा प्रवक्ता शर्मा निकट उम्मेदवार विजयी भएका छन । शिवसताक्षीका सभापति अशोक बस्नेत र मेचीनगरका सभापति सुवेशकुमार पनेरु (सुदय) प्रवक्ता शर्माका खास मानिस हुन । व्यक्तिगत इगोका कारण शर्मा निकट जिल्ला तहका एकदुई जना नेताले बस्नेत नभई तुलाराम बोखिम आफ्नो समूहको उम्मेद्वार भएको हल्ला चलाए पनि बस्नेतलाई जिताउन पालिका तहमा शर्मा निकट नेता सबै एक भएर लागेका थिए । बस्नेत स्वयं आफूलाई खुलेर शर्माको निकट भन्न रुचाउँछन्। । बस्नेतले २२५ मत ल्याउँदा बोखिमले १४७ मत ल्याएका छन ।
मेचीनगर सभापति पनेरुले त संसदीय चुनावमा झापा क्षेत्र नं. १ मा शर्माको जीत सुनिश्चित गर्न आफू मेचीनगरमा सभापतिको उम्मेद्वार बनेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन । उनले आफ्नो नेता शर्मा भएको निर्धक्क बताउने गरेका छन । ‘उहाँ अहिले महामन्त्रीको उम्मेदवार भएकाले यहाँ बसिरहन भ्याउनु हुन्न’ पनेरुले भने, ‘जोसुकैले जेसुकै भनोस उहाँ मेरो आदरणीय नेता हो, म उहाँलाई जिताउन लाग्छु ।’ शर्माको गृहनगर धुलाबारीका बासिन्दा पनेरु मेची नगरपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष समेत हुन । नगरको चुनावमा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनेरुसँग नवीन बराललाई प्रतिस्पर्धामा उतारियो । यो रणनीतिक योजना भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन । यसअघि कुनै पनि समुहमा नखुलेका बराल अब शर्मा समूहमा खुलेका छन । मेचीनगर–४ का वडाध्यक्ष बराल युवाका माझमा प्रभाव राख्छन । यसले मेचीनगरमा थप शक्ति संचय भएको शर्मा निकट कांग्रेसका एक जिल्ला सदस्यले बताए । भद्रपुर नेता सिटौलाको गृहनगर हो । त्यहाँ नेतृत्वका लागि पाँच जनाले प्रतिस्पर्धा गरे । उनीहरू पाँचै जना सिटौला निकट हुन ।
प्रतिस्पर्धी चारजनालाई पछि पार्दै रामबहादुर कँडेल विजयी भएपछि त्यहाँको असन्तुष्ट मत शर्माको पक्षमा जाने सिटौला निकट एक नेताले बताए । ‘कृष्ण दाइले आफ्नो समूहबाट एकजनालाई मात्रै उम्मेद्वार बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ ती नेताले भने, ‘त्यो काम दाइले गर्नु भएन, त्यसको असर स्थानीय तहमा अवस्य पर्छ ।’ यद्यपि, भद्रपुरमा सिटौला समूह दह्रो छ । कँडेलले ६१ मत ल्याएर जित्दा, अर्का उम्मेदवार मदनबहादुर बस्नेतले ५३, बन्धु कार्कीले ५१, भरत प्रसाईंले ५० र ज्ञानबहादुर चौहानले १२ मत ल्याए । उनीहरूलाई मिलाउन नसक्नु सिटौला पक्षको गम्भीर कमजोरी भएको सिटौला पक्षधरहरु नै स्वीकार्छन् ।
बिर्तामोड शर्माका लागि सधैं अप्ठ्यारो ठाउँ हो । जहाँ उनको अवस्था कमजोर नै मानिन्छ । नगर नेतृत्वमा सिटौला समूहले जीत हासिल गरे पनि यसपटक बिर्तामोडमा शर्मा समूहले शक्ति एकीकृत गरेको छ । आफ्नो समूहबाट कुलप्रसाद संग्रौलालाई उम्मेदवार बनाएर भोजराज सिटौलासँग प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नु नै उपलब्धि भएको बिर्तामोडका एक नेताले बताए । संग्रौला यसअघि सिटौला समूहमा नै थिए । डिल्ली सिटौला र सुधिर शिवाकोटीको गृहनगर बिर्तामोडमा भोजराजले १५९ मत ल्याएर जीत हासिल गरे । पराजित संग्रौलाले ११६ मत ल्याए । हारका बाबजुद पनि शर्मा समूहले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको देखिन्छ । सिटौला बिर्तामोड वडा नं. ३ र संग्रौला वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष समेत हुन । वडाध्यक्ष बनेपछि उनीहरूको टकराब सुरु भएको निकटवर्तीहरु बताउँछन । प्यानलै सिटौला पक्षको आएको बिर्तामोडमा जिल्ला सदस्य जलकुमार गुरुङ, नेताहरू हर्कलाल गिरी, युवराज प्रसाईं लगायत शर्मा पक्षमा खुलेर लागेका छन । वडामा नै चुनाव हारेपछि दुईदुई पटक संविधानसभामा सदस्य बनेका बिर्तामोडका अमृतलाल राजवंशी कांग्रेस परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन । उनी सिटौला र शिवाकोटी निकट भएकैले संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । उनलाई चुनावमा हराइनु र एमालेमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न नसक्नु सिटौला समूहका लागि मात्रै होइन कांग्रेसकै लागि ठूलो क्षति हो ।
विगतमा बिर्तामोडबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमितिसम्म पुगेका राजेश खड्का यसपटक क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै छानिएनन्। काठमाण्डौको जेम्स र बिर्तामोडको लिटल फ्लावर स्कुलका सञ्चालक समेत रहेका खड्का कांग्रेस भित्र आर्थिक भरथेगका दरिलो खब्बा मानिन्छन । उनी क्षेत्रीय प्रतिनिधिसम्म नबनेकाले बिर्तामोड कांग्रेसमा चर्को असन्तुष्टि रहेको स्पस्ट देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन शिवाकोटीका विश्वास पात्र मानिने कुमार भट्टराईले वडामा नै चुनाव हारे । बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष समेत भइसकेका भट्टराईले चुनाव हार्नुको कारण अहिले खोजी भइरहेको छ । राप्रपाबाट कांग्रेस छिरेका उनी केही वर्ष भित्रै नेताहरूलाई रिझाएर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष बनेका थिए । उद्योगी व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका भट्टराईले चुनाव हारेपछि सिटौला÷शिवाकोटी समूहमा गडबडी रहेको चर्चा छ । सोही समूहमा रहेका राजु न्यौपाने पनि वडामा नै पराजित भए । उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका न्यौपानेलाई वडामा चुनाव जिताउन नस्क्नु सिटौला समूहको कमजोरीका रूपमा अथ्र्याइन थालिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र थापा पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि छानिन सकेनन । उनी दिल्लीमा रहेकाले प्रतिनिधि नछानिएको बताइए पनि थापाले वारेस मार्फत क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिएका थिए । थापा सिटौला निकट व्यवसायी नेता हुन । उसबेला सुशील कोइराला झापा आउँदा खानेबस्ने घर नै थापाको हुन्थ्यो ।
बिर्तामोडमा सिटौला पक्षको अर्को क्षति नेविसंघ झापा सचिव पोषराज कटुवाललाई वडासचिवमा चुनाव जिताउन नस्क्दा पनि भएको छ । विद्यार्थी माझ प्रभाव राख्ने र सिटौला समूहका भरोसा योग्य पात्रका रूपमा हेरिएका उनलाई चुनाव जिताउन नसक्नु सो समूहको कमजोरीको रुपमा व्याख्या गरिन थालेको छ । कांग्रेस पार्टी सभापति उद्वब थापाको गृहनगर अर्जुनधारामा सिटौला समूहका हेमराज खरेलले सभापतिमा चुनाव जितेका छन । प्रतिस्पर्धी शर्मा समूहका भीष्म मिश्रलाई २७ मतले चुनाव हराएपनि त्यसका लागि सिटौला समुहले बुढाथोकी समूहको सहयोग लिनु परेको छ । खरेलले १३१ र मिश्रले १०४ मत ल्याए । बुढाथोकी समूहले सहयोग नगरेको भए खरेल पराजित हुने एक नेताले बताए । खरेल पराजित हुने अवस्था आएपछि सभापति थापाले अन्तिम समयमा बुढाथोकीसँग सहयोग लिएको शर्मा निकट एक नेताको भनाइ छ । ‘खरेलले चुनाव हार्ने वातावरण थियो’ ती नेताले भने, ‘सभापतिले प्रतिष्ठाको विषय उठाएर कुमार दाइसँग सहयोग मागेपछि मात्रै भीष्मले चुनाव हारेको हो ।’ भीष्मलाई चुनाव जिताउन युवा पंक्ति उभिएको थियोे । अर्जुनधारामा सभापति बाहेकमा दुबै पक्षबाट उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिको बराबरी प्रतिनिधित्व गराएर पदाधिकारी चयन गरिएको छ । खरेललाई चुनाव जिताउने रणनीति अनुसार थापा/बुढाथोकीले अन्य पदमा सर्वसम्मत गराउन पहल गरेका थिए ।
कनकाइ जिल्ला सभापतिका उम्मेद्वार थेवेको गृहनगर हो । त्यहाँ दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले सभापति जितेका छन । प्रसाईंले १२९ मत ल्याउँदा प्रल्हादप्रसाद घिमिरेले ५० मत मात्रै ल्याए । प्रसाईं सभापति थापा, केन्द्रीय सदस्यद्वय बुढाथोकी, सरिता प्रसाईं र नेता थेवेका साझा उम्मेदवार हुन । घिमिरे शर्मा खेमाका उम्मेदवार भएपनि प्रसाईंको स्पष्ट खेमा छैन । उनी पक्षका मानिस पार्टीको आगामी चुनावमा थापा, प्रसाईं र बुढाथोकी पक्षमा बाडिने कनकाइका एक वडा सभापतिले बताए । कमल गाउँपालिकामा सभापतिमा समान मत ल्याएर आधा आधा समय सभापति चलाउने सहमति अनुसार पहिलो सभापति चलाउने जिम्मा पाएका बुद्धिराज न्यौपाने कोइराला खेमाका हुन । उनी डा. शेखर कोइराला र नेतृ सुजाता कोइराला नजीक छन । न्यौपाने गिरिजाप्रसाद कोइराला (जिपी) फाउन्डेसन झापाका अध्यक्ष समेत हुन । उनी सिटौला मन्त्री हुँदा टिममा बसेर काम गरेका व्यक्ति पनि हुन । विगतमा नेविसंघ झापाको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी पर्शुराम रिजाललाई शर्माले नेविसंघ सभापति बनाएपछि टाडिएको बताइन्छ । यद्यपि न्यौपाने शर्मासँगको सम्बन्धबाट रिङआउट भइसकेका छैनन । युवराज दाहाल नेविसंघ झापा सभापति हुँदा न्यौपाने कोषाध्यक्ष थिए । दाहाल र शर्माको सम्बन्ध झापामा अति निकट छ । अहिले पनि न्यौपाने दाहालसँग नजिक छन । ६५ मत ल्याएका मध्ये न्यौपानेले सुरुवातीमा सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन । समान मत ल्याएका शर्माका निकट खगेन्द्र भण्डारीले पछिल्लो आधा समय सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन । कमलमा को अघि को पछि सभापतिको भूमिकामा रहने भन्ने विषयमा गोलाप्रथाको सहायता लिइएको थियोे ।
दमकमा प्रकाश प्रसाईंले नगरको नेतृत्व गर्ने भएका छन । उनी पर्शुराम रिजाल र रोषन विष्टलाई पछि पार्दै सभापति निर्वाचित भएका हुन । उनले १७६ मत ल्याउँदा रिजालले ९९ मत ल्याए । विष्टले ४५ मत ल्याए । यसअघि दमक सभापति विष्ट हुँदा प्रसाईं सचिव थिए । अहिले प्रसाईं र विष्टको टिम फुटेको छ । प्रसाईं सिटौला टिममा नै रहेका छन भने नेविसंघको पूर्वसभापति समेत रहेका विष्ट पौडेल÷कोइराला समूह समीप पुगेको बताइन्छ । नेविसंघ झापाका पूर्वसभापति नै रहेका रिजाल शर्माका विश्वासिला युवा नेता हुन । यसले दमकमा पनि त्रिकोणात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । गौरादह नगरपालिकामा यादवराज सेढाईंले सभापति दोर्होयाएका छन । सीताराम कोइरालालाई दुई मतले पछि पार्दै सेढाईं सभापति बनेका हुन । उनीहरूले क्रमशः १२२ र १२० मत पाएका हुन । सेढाईं, शेखर कोइराला नजिक मानिन्छन । उनको कोइरालासँग राम्रै सम्बन्ध भएको एकजना पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधिले बताए । ‘सिटौला भन्दा सेढाईं शेखरसँग नजिक हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘नगर प्रमुख रोहितकुमार साह जता लाग्यो, सेढाईंजी त्यतै लाग्नु हुन्छ, उहाँलाई सिटौलाको पक्का मानिस भन्न मिल्दैन, बरु उहाँलाई शेखर निकटभन्दा हुन्छ ।’ दुई मतले पराजित कोइराला भने शर्माका निकट मानिस हुन । गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको सभापति निर्वाचित अग्नु राजवंशीको खास निकटता कोहीसँग पनि छैन । उनी राजनीतिक लाभहानी हेरेर अघि बढ्ने मानसिकतामा छन । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका राजेन्द्र कार्की सिटौला समूहका मानिस हुन । गौरीगञ्ज २ का वडाध्यक्ष समेत रहेका राजवंशीले ७८ मत ल्याएर चुनाव जितेका हुन । निवर्तमान गाउँ सभापति समेत रहेका कार्कीले ३९ र अर्का प्रत्यासी कालेश्वर राजवंशीले ६ मत ल्याएका छन ।
बाह्रदशी गाउँपालिका सभापति निर्वाचित भएका इन्द्र बस्नेत सिटौला निकट हुन । प्रतिष्पर्धी टंक साह स्पष्ट नखुलेपनि जिल्ला नेता भगिरथ पोद्दार र गाउँपालिका अध्यक्ष खड्ग राजवंशी निकट मानिन्छन् । भगीरथ झापामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको नेतृत्व गर्ने मध्येका एक नेता हुन । बस्नेतले १०१ मत ल्याउँदा ५८ मत ल्याएका साहलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न उठाइएको बताइन्छ । मधेसी समूदायको बाहुल्यता रहेको सो क्षेत्रमा साह बलिया उम्मेद्वार मानिए पनि पराजित भएपछि त्यसको आन्तरिक समीक्षा सुरु भएको स्थानीय नेताहरू बताउँछन्। । सो क्षेत्रमा पोद्दार प्रभाव राख्ने नेता मानिन्छन । उनले साहलाई आफ्नो अनुकुल अघि बढाउन सक्ने बताइन्छ । जिल्लामा संख्यात्मक रूपमा सिटौला पक्षले बढी सभापति जितेपनि शर्मा पक्षले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेको छ । ‘हिजो हामी ७५ / २५ को अवस्थामा थियौ, आजको स्थिति सुध्रिएको छ’ शर्मा निकट एक जिल्ला सदस्यले भने, ‘अहिलेको हाम्रो पोजिससन ५० / ४५ को हो, ५ प्रतिसत त अरुको हिस्सा छ ।’ उनले सरिता प्रसाईं, केशवकुमार बुढाथोकीको सहयोगमा पालिकामा सिटौला पक्षले केही बढी ठाउँमा जितेको दाबी गरे । सरिता र शर्माको राजनैतिक सम्बन्ध राम्रो भएपनि आफ्नो अस्तित्वको लागि सरिताले स्थानीय स्तरमा बुढाथोकी समूहसँग सहकार्य गरेको निकटस्थहरु स्वीकार्छन । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन भएकाले आफूहरूले खुलेर बोल्न नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
फेरियो जिल्लाको समीकरण :
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरणबाटै जिल्लामा समीकरण परिवर्तन भएको छ । जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुको बहुमत शर्मा पक्षमा उभिएको छ । मेचीनगरबाट उपसभापति राम कट्टेलले सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि समीकरण बदलिएको हो । यस अघि सिटौला खेमामा रहेका कट्टेलको उम्मेद्वारीलाई शर्माले समर्थन जनाए पछि सचिवद्वय प्रेम सम्बाहाम्फे, तारवीर कटुवाल, उपसभापति देवी राजवंशी, सहसचिव राजेन्द्र भण्डारी र जिल्ला पार्टी प्रवक्ता लोकराज ढकाल शर्मा पक्षमा उभिएका छन । सम्बाहाम्फे बाहेक अरु सबै यसअघि सिटौला पक्षमा थिए । भण्डारी र राजवंशी बाहेक अरु सबैको घर मेचीनगर नै हो । मेचीनगरकै शर्माले केन्द्रीय महामन्त्री र कट्टेलले जिल्ला सभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि जिल्ला समितिको समीकरण नै परिवर्तन भएको हो । विजयकुमार गच्छदार कांग्रेसमा प्रवेश गरेसँगै राजवंशी झापा कांग्रेसको उपसभापति भएका हुन । राजवंशी त्यसबेला गच्छदारको पार्टीमा उपसभापति थिए ।
असोज ३ गते शर्माले बिर्तामोडमा २४ बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दा राजवंशी उपस्थित भएर शर्मा समूह खुलेका थिए । शर्माको समर्थन पाएका कट्टेलले असोज ६ गते कचनकवलमा भएको कार्यक्रम सिटौलाकै अगाडि आफू जोसुकैसँग चुनाव लड्न तयार भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सहिद चन्द्रमणी भट्टराई प्रतिष्ठानको साधारण सभामा उपस्थित सिटौलाले त्यसबेला कट्टेल र थेवे दुबैलाई जीतका लागि शुभकामना दिएका थिए । सिटौलाको त्यो अभिव्यक्तिले पनि उनी गृहजिल्ला झापामा निकै सोचेर अघि बढ्ने अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ । आफ्ना विश्वासपात्र कट्टेल एकाएक शर्मा निकट भए पछि सिटौलालाई अप्ठ्यारो पर्नु स्वभाविक भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन । शर्मा र कट्टेल एउटै वडाका बासिन्दा हुन । त्यही भएर पनि उनीहरूको गठजोड मिलेको हुनसक्ने बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १३, २०७८, ०६:२७:००